कलिउड – Page6– NepalDailyPost
कलिउड : फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को ट्रेलर सार्वजनिक
एजेन्सी, काठमाडौं। फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। फिल्ममा दयाहाङ राई उपासना सिंह टकुरी, विल्सन विक्रम राई, कर्मा, विजय बराल, बुद्धि तामाङ, माओत्से गुरूङ तथा रिश्मा गुरूङ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । फिल्मलाई । रामबाबु गुरूङले निर्देशन गरेका हुन्…
कलिउड : “हिरो नं. १” को ट्रेलर सार्वजनिक
एजेन्सी, काठमाडौं। नायक जयक किशन बस्नेतले निर्माण गरेको पछिल्लो चलचित्र “हिरो नं. १” को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नायक बस्नेतकै सञ्चालनमा रहेको मोबाई टिभी नामक युटुव च्यानल मार्फत यस चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको हो । जय किशन बस्नेत फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण…
कलिउड : ‘छ माया छपक्कै’ काे ‘जुनको जुनेली’ मा दिपक र केकीकाे यस्ताे रोमान्स
एजेन्सी, काठमाडौं। फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को ‘जुनको जुनेली’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । फिल्मको गीतमा बसन्त थापाको संगीत रहेको जुनको जुनेलीमा संगीतकार थापा र गायिका मिना निरौलाले स्वर भरेका छन् । शब्द राजेन्द्र थापाले लेखेका हुन् , भने कविराज गहतराजको…
कलिउड : ‘छ माया छपक्कै’को ‘जुनको जुनेली’ बोलको गीत सार्वजनिक
एजेन्सी, काठमाडौं। चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘जुनको जुनेली’ बोलको गीत मा बसन्त थापा र मिना निरौलाको स्वर रहेको छ । , बसन्त थापाको संगीत र राजेन्द्र थापाको शब्द रहेको गीतमा दिपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल,…
‘कलाकारले २० लाख लिएपछि सो फिल्मका लागि शत प्रतिशत काम दिनुपर्छ’ : पुजा शर्मा
एजेन्सी, काठमाडौं। नायिका पुजा शर्माले कलाकारले महंगो पारिश्रमिक लिएर त्यो फिल्मको लगानी सबै उठाउनुपर्छ भन्ने नभएको बताएकी छिन् । दुई फिल्ममा लगभग २० लाख लिएको समाचार बाहिर आएका बेला । पूजाले भने कलाकारले २० लाख लिएपछि सो फिल्मका लागि शत प्रतिशत काम…
कलिउड : सुन्दरी नायिका नम्रता श्रेष्ठको चौतर्फी प्रशंसा र चर्चा
एजेन्सी, काठमाडौं। गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको अभिनेतृ नम्रता श्रेष्ठ स्टारर फिल्म जाइराबाट उनले प्रशंसा पाएकी छिन्। फिल्म रिलिजकै बीचमा यसको ओरिजिनल साउन्ड ट्र्याक जिन्दगीको खेल सार्वजनिक गरिएको छ। टम्बल बिड ब्यान्डले तयार पारेको गीतको भिडियोमा प्रियंका आरएल थापा, मोनिषा कर्माचार्य, मोनिका कर्माचार्य…
कलिउड : चलचित्र गुञ्जनको शुभमुर्हत पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा
एजेन्सी, पोखरा । नेपाली चलचित्र ‘गुञ्जन’ को शुभमुर्हत भएको छ । पोखराको विन्ध्यावासिनी मन्दिरमा चलचित्र गुञ्जनको आज मंगलबार शुभमुर्हत भएको हो । चलचित्रको छायंकन आजदेखि पोखरामा सुरु भएको छ । उक्त चलचित्रको ९० प्रतिशत छायंकन पोखरामा हुने र बाँकी काठमाडौंमा गरिने निर्माण…
कलिउड : चलचित्र ‘जीवन काँडा की फूल’को ट्रेलर सार्वजनिक
एजेन्सी, काठमाडौं। चलचित्र ‘जीवन काँडा कि फूल’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा मङ्गलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्माण पक्षले चलचित्रको ट्रेलर र सिनेमाघरमा आउँने मिति सार्वजनिक गरेको हो । चलचित्र सिनेमाघरमा कार्तिक २२ गते आउने घोषणा गरिएको छ । चलचित्रको ट्रेलरलाई…
कलिउड : ‘चपली हाइट ३’ निर्माण हुँदै, स्वस्तिमा नायिकाकाे सम्भावना
एजेन्सी, काठमाडौं। चलचित्र ‘चपली हाइटको तेस्रो सिरिज ‘चपली हाइट ३’ निर्माण हुने भएको छ । अर्जुन कुमारले निर्माण गर्ने यस चलचित्र को निर्माण घोषणा गर्ने तयारी चलिरहेको छ । यस चलचित्रलाई निकेश खड्काले निर्देशन गर्दै छन् । अर्जुन र निकेशले चलचित्र ‘फाटेको…
कलिउड : फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को फर्स्ट लुक सार्वजनिक, घुम भित्र केकी
एजेन्सी, काठमाडौं। फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को फर्स्ट लुक सार्वजनिक गरिएको छ। दिपक राज गिरी र दिपा निरौलाको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’को फर्स्ट लुक्सको रुपमा एक पोस्टर सार्वजनिक भएकाे हाे । सार्वजनिक पोस्टरमा केकी अधिकारी, दिपक राज गिरी, जितु नेपाल र केदार…